Nwa amaala Montenegrin maka oke nke Durmitor Hotel & Villas
Etinye ego na nkwari akụ + ensmụ amaala nke Montenegro
N'ime obi nke ogige ntụrụndụ kacha mma nke Montenegro, Durmitor National Park, nke dị nso na Black Lake (Crno Jezero),
Mitlọ Dur Duror & Villas amalitela iwu ụlọ nke naanị ya nwere Durmitor Hotel na gburugburu ya.
Hotellọ nkwari akụ Durmitor ọhụrụ ahụ ga-abụ ụlọ nkwari akụ 5 nke mbụ na Zabljak, nke ga-emejupụta njegharị ndị njem nke ugwu ugwu.
Mpụga nke ụlọ nkwari akụ ahụ ga-adị ka ụlọ nkwari akụ ochie Durmitor, nke bụ akara nke njem nlegharị ugwu na Montenegro.
kemgbe 1939, ya mere ga-enye ndị ọbịa ya ezigbo ugwu ikuku yana ọkaibe na nkasi obi.
Lọ oriri na ọ hotelụ willụ ahụ ga-enwe ụlọ obibi okomoko 55, ụlọ oriri na ọ 2ụ XNUMXụ XNUMX, ebe ọdịmma na spa, ọdọ mmiri ime ụlọ na n'èzí, ebe a na-egwu ụmụaka, ebe nzukọ na ime ọgbakọ.
Nakwa na nso ụlọ nkwari akụ ahụ, a ga-ewu obodo iri na atọ ugwu ugwu, nke ga-enwukwa site na ịma mma 13.
Ihe na-adọrọ mmasị pụrụ iche nke ebe a na-eme njem bụ ebe ọ dị, nke amaara maka ịma mma ya na-adịghị ahụkebe nke na-agaghị ahapụ onye ọ bụla.
Ndị ọbịa nke ebe a ga-ahụ onwe ha ebe kwesịrị ekwesị maka njem ugwu, mana ọ bụrụ na ha chọrọ izuike, ha ga-anọkwa ebe kwesịrị ekwesị ịkwụpụ site na ọgba aghara na ndụ kwa ụbọchị, zuo ike site na ndụ ngwa ngwa na nwee udo na jụụ nke okike.
Durlọ oriri na ọorụ inụ Durmitor dị na mgbago ugwu Montenegro n'obodo Zabljak (obodo nwere ugwu kachasị elu na Balkans, na elu 1450 m karịa ọkwa oke osimiri) na ihe dị ka nkeji iri na-aga site na ọdọ mmiri kachasị mma na
Ogige Ntụrụndụ Durmitor - Black Lake (Crno Jezero).
Ezọ E65 bụ okporo ụzọ jikọtara Zabljak na ndị ọzọ Montenegro na ọ bụ ụzọ bụ isi jikọrọ ụsọ osimiri Montenegrin, Podgorica na ugwu.
Njikọ njikọ ụgbọ njem ọzọ dị mkpa bụ n'okporo ụzọ Shavnik na Niksic ruo Risan ma ọ bụ Podgorica.
Obodo ahụ nwekwara ọdụ ụgbọ elu obodo (ọdụ ọdụ ụgbọ elu Zabljak), mana ọdụ ụgbọ elu mba kacha nso dị:
Ọdụ ụgbọ elu Podgorica dị kilomita iri atọ na otu. Enwere ụgbọ elu oge niile na ọdụ ụgbọ elu a na Europe dum.
Ọdụ ụgbọ elu Tivat bụ ọdụ ụgbọ elu nke abụọ kacha nso ma dị 170 kilomita - ụgbọ ala atọ na ọkara.
B C ONYE BU BYBỌCH BY site na ụlọ ọrụ ego
Ezubere usoro ihe omume a maka afọ 3, ebe ndị na-achọ 2000 zubere.
N'iburu n'uche na owuwu nke Durmitor Hotel na obodo ndị gbara ya gburugburu bụ ego dị na mgbago ugwu nke mba ahụ, ihe gọọmentị chọrọ bụ ịkwụ ụgwọ
ego nke 100 euro maka mmepe + itinye ego nke euro 000 (ọnụahịa gụnyere VAT).
Na mgbakwunye, onye nyocha kwesịrị ịkwụ ụgwọ:
15000 euro maka ngwa nkeonwe,
10 maka onye ọzọ nọ n'ezinaụlọ na opekata mpe ndị ezinụlọ anọ, yana
50 euro maka onye ọ bụla so n'ezinụlọ.
Ihe kpatara ị ga - eji tinye akwụkwọ maka paspọtụ Montenegrin:
A na-enwetara onwe gị nwaamaala n'ime ọnwa isii.
Obere umuaka nwere ike itinye akwukwo na ndi isi akwukwo.
Ekwesighi ka onye nyocha ahụ jụ akwụkwọ amaala ya.
Ntinye n'efu na-enweghị visa na mba 123.
Ọnọdụ ala dị oke mma nke mba ahụ.
Ezigbo ebe ịnọ.
Offọdụ n'ime akwụkwọ ndị bụ isi achọrọ maka ngwa ahụ:
Paspọtụ ziri ezi;
Akwụkwọ nke enweghị ndekọ omempụ;
Nkwupụta akaụntụ ụlọ akụ;
Data nkeonwe na mkpụmkpụ nke onwe;